ဒေ့ဗ်ရေ…. ခင်ဗျား ခြုံခြုံနေတဲ့ မြန်မာ့အလံကြီးအတွက် တကယ့်ကို ရှက်မိပါရဲ့ဗျာ…… – Maharmedianews
ဘုန်းကြီးပျံပွဲမှာ သေနတ်ပစ်ဖောက်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကို ပရိတ်သတ်တွေက ဖမ်းဆီးပြီး ကြိုးနဲ့တုပ်
( ၂ ) ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ ကျပ်​တန်​ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီဆုပေါက်မဲဂဏန်း များ
ယနေ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့(၂၅) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစ/ အဆုံး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀မှာနိုင်​ငံခြားသား​တွေနဲ့ပြည့်​​နေမယ့်​နေရာ ရေ၀င်္ကဘာဂူ
တရုတ်​ပိုင်​ ​ကျောက်​ကုမ္ပဏီတစ်​ခုကို ရွာသားများက မီးရှို့လိုက်​ရာမှ တစ်ရွာလုံး မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်း
ဒေ့ဗ်ရေ…. ခင်ဗျား ခြုံခြုံနေတဲ့ မြန်မာ့အလံကြီးအတွက် တကယ့်ကို ရှက်မိပါရဲ့ဗျာ……
March 26, 2019 admin555
သူတို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ကြည့်ပြီး ရှက်လွန်းလို့ မျက်ခွက်တွေပါ ပူလာတယ်။
ဘာတဲ့… မြန်မာလက်ဝှေ့ချန်ပီယံကို မြန်မာပဲ ဖြစ်စေချင်လို့ လက်ရှိချန်ပီယံ နိုင်ငံခြားသားဆီက စာချုပ်အကြောင်းပြပြီး ချန်ပီယံဆုသုံးဆုကို ပြန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်တဲ့။
အစကတည်းက မြန်မာလက်ဝှေ့ချန်ဝှေ့ချန်ပီယံကို မြန်မာပဲ ဖြစ်စေချင်ရင် ဘာလို့နိုင်ငံခြားသားကို ခေါ်ထိုးခိုင်းသေးလဲ။ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံကို မြန်မာပဲ ဖြစ်စေချင်ရင် ဒေ့ဗ်ကို နိုင်အောင်ထိုးပြီး ချန်ပီယံဆုကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်ယူလေ။ ကလေးတွေ သရေပင်ပစ်တဲ့ဝိုင်းလို နင်က လက်တည့်တယ်။ နင်မပါနဲ့ ဆိုတဲ့ အထာတွေ။
ဒေ့ဗ်ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ လာနေနေတာ ကြာလှပြီး။ ဖေ့စ်ဘုတ် နာမည် Dave Leduc ကိုတောင် ဘယ်သူကြပ်ပေးလိုက်လဲမသိဘူး ဒေဝလဒစ်ဆိုပြီး ရေးထားလို့ ဝိုင်းရယ်ခံရသေးတယ်။ အခုမှ ဒေဝ ဖြစ်သွားတာ။ သူ့နာမည် Dave ကို မြန်မာလို ဒေဝလို့ ခံယူထားတဲ့လူ။ မြန်မာအလံခြုံတယ်၊ မြန်မာ့ကြိုးဝိုင်းမှာ မြန်မာကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ မြန်မာ့လက်ခမောင်းခတ်ပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ တစ်သားတည်း ကျခဲ့တဲ့လူ။ မင်္ဂလာဆောင်တာတောင် မြန်မာရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း မင်္ဂလာဆောင်ထားတာ။
သူက မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်တယ်… အစကတည်းက မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်မှန်း အားလုံးသိတာပဲ။ ခင်ဗျားတို့လည်း သိတာပဲ။ အခုမှ သူက နိုင်ငံခြားသား ထဖြစ်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ အစကတည်းက နိုင်ငံခြားသားလေ။ မြန်မာလက်ဝှေ့မှာ မြန်မာပဲ ချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် သူ့ကို အစကတည်းက မထိုးခိုင်းနဲ့လေ။ အခုကျမှ မြန်မာမဟုတ်လို့ ရပြီးသားချန်ပီယံဆု သုံးဆုလုံး ပြန်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ကာ နည်းနည်းလေးမှ မရှက်တတ်ကြတာလားပဲ။
ဥပမာပေးသွားသေးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလုပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်အက်ဆေးပြိုင်ပွဲကို အမေရိကန်ကလူက လာပြိုင်ပြီး ဆုယူသွားသလို ဖြစ်နေလို့တဲ့။ ဟဲ့… ပလုတ်တုတ်… ဥပမာပေးတာကိုက တလွဲ။ အခု သူချန်ပီယံဖြစ်နေတာ မြန်မာ့လက်ဝှေ့လေ။ ဘောက်ဆင်မဟုတ်ဘူး။ နပန်း မဟုတ်ဘူး။ စမတ်ဒေါင်း မဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်အက်ဆေးပြိုင်ပွဲမှာ အမေရိကန်ကကောင် ဆုလာယူသွားရင်တော့ မမျှတပေမယ့် မြန်မာစာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာတွေထက် စာစီစာကုံးကောင်းလို့ ဆုရသွားတာလေ။ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အမွေအနှစ်ကို ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေထက် ပိုတော်နေတာ သူ့အပြစ်လား၊ ကိုယ်တွေအပြစ်လား။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကို မြန်မာပဲ ချန်ပီယံဖြစ်ရမယ် ကြွေးကြော်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထက် မြန်မာဆန်ဆန် မြန်မာ့ဝတ်စုံ အပြည့်ဝတ်ထားတဲ့ ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့် နားထောင်ပေးနေတဲ့ ဒေ့ဗ်ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုရှက်မှန်းကို မသိတာ။
ကိုယ်က ပိုကြိုးစားပြီး ဒေ့ဗ်ဆီက ချန်ပီယံဆုကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်ယူမယ် မရှိဘူး။ စာချုပ်အကြောင်းပြပြီး ဆုကို ပြန်သိမ်းသတဲ့။ ဒဗလယ်စတန်းဒတ်တွေပါကွာ။
အဲ့တော့ ဒေ့ဗ်နဲ့ ပြိုင်ရင် ရှုံးနိုင်သေးတဲ့ လူကို ချန်ပီယံလို့ သတ်မှတ်ရမယ်ပေ့ါ။ မြန်မာတွေ တီထွင်ထားတဲ့၊ မြန်မာတွေ လက်ပွန်းတတီးရှိတဲ့ မြန်မာလက်ဝှေ့ကို မြန်မာတွေထက် ပိုကျွမ်းကျင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို နိုင်အောင်မထိုးသတ်နိုင်ဘဲ ပြန်သိမ်းထားတဲ့ ချန်ပီယံဆုကြီးကို မြန်မာတစ်ယောက်က ယူရမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ချန်ပီယံပါ… ဒါပေမယ့် ဒေ့ဗ်ကိုတော့ မနိုင်လို့ ပြန်သိမ်းထားတဲ့ဆုကြီး ရထားတာပါလို့ ကြော်ငြာထားသလို ချန်ပီယံဆုကြီးကို ဘယ်သူက ယူချင်မလဲ။
မြန်မာတွေ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အရှက်ရနေရတာ အဲ့လို စိတ်ထားတွေကြောင့်ပဲ။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိကြစမ်းပါ။ အဆင့်အတန်းရှိကြစမ်းပါ။ Professional ဆန်ကြစမ်းပါ။ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံက မြန်မာမဖြစ်လို့ ရှက်စရာကောင်းတာထက် မြန်မာလက်ဝှေ့ချန်ပီယံက မြန်မာမဟုတ်လို့ ဆုတွေပြန်သိမ်းပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာက မြန်မာတွေအတွက် ပိုရှက်စရာကောင်းတယ်။
မြန်မာ့လက်ဝှေ့ဆိုတာ ယောက်ျားပီသတဲ့ ယောက်ျားတွေ အတွက် အမှတ်သင်္ကေတပဲ။ မလိုရင် ငါ့အိုးပုတ်ပြန်တောင်းတဲ့ မိန်းမလိုမိန်းမရ အတွေးအခေါ်တွေအတွက် မဟုတ်ဘူး။
ဒေ့ဗ်ရေ…. ခင်ဗျား ခြုံခြုံနေတဲ့ မြန်မာ့အလံကြီးအတွက် တကယ့်ကို ရှက်မိပါရဲ့ဗျာ…
← Chat Box မှတဆင့် သားကောင်ရှာ ကြံစည်တဲ့ အွန်လိုင်းမုဆိုး တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီး
ချစ်သူနဲ့ စကားများပြီး ရေကန်ထဲ ခုန်ချသွားတဲ့ လူငယ်တစ်ဦး →
April 1, 2019 admin555 Comments Off on ဘုန်းကြီးပျံပွဲမှာ သေနတ်ပစ်ဖောက်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကို ပရိတ်သတ်တွေက ဖမ်းဆီးပြီး ကြိုးနဲ့တုပ်
ခိုင်မင်း(ကျောက်ဖြူ) / DMG ဧပြီ ၁ ၊ ကျောက်ဖြူ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ချောင်းဝကျေးရွာမှ ဘုန်းကြီးပျံပွဲတွင် သေနတ်ပစ်ဖောက်ခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကို ကျေးရွာပွဲလုံခြုံရေးအဖွဲ ထိန်းသိမ်းရသည်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ည ၅
April 1, 2019 admin555 Comments Off on ( ၂ ) ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ ကျပ်​တန်​ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီဆုပေါက်မဲဂဏန်း များ
April 1, 2019 admin555 Comments Off on ယနေ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့(၂၅) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစ/ အဆုံး
April 1, 2019 admin555 Comments Off on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀မှာနိုင်​ငံခြားသား​တွေနဲ့ပြည့်​​နေမယ့်​နေရာ ရေ၀င်္ကဘာဂူ
April 1, 2019 admin555 Comments Off on တရုတ်​ပိုင်​ ​ကျောက်​ကုမ္ပဏီတစ်​ခုကို ရွာသားများက မီးရှို့လိုက်​ရာမှ တစ်ရွာလုံး မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်း
ဒီနေ့ ပွဲစဉ်အပြီးမှာပဲ စင်ပေါ်တက်လာပြီး စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန်ဗီယာရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်
March 31, 2019 admin555 Comments Off on ဒီနေ့ ပွဲစဉ်အပြီးမှာပဲ စင်ပေါ်တက်လာပြီး စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန်ဗီယာရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်
ကိုယ့်အိမ်ကွင်းမှာပဲ စွာတယ်လို့ ဝေဖန်နေသူများကို အဝေးကွင်းလဲ စွာကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်(Video)
March 31, 2019 admin555 Comments Off on ကိုယ့်အိမ်ကွင်းမှာပဲ စွာတယ်လို့ ဝေဖန်နေသူများကို အဝေးကွင်းလဲ စွာကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်(Video)
အပိုဆုပေးမယ်ကြေငြာထားပြီး မပေးလို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုရှင် ဆရာတော်
March 31, 2019 admin555 Comments Off on အပိုဆုပေးမယ်ကြေငြာထားပြီး မပေးလို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုရှင် ဆရာတော်
“ရွှေကြာ” (သို့မဟုတ်) တရုတ်ရာဇ၀င်ထဲက ဓလေ့ ထုံးတမ်းရဲ့ သားကောင် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဘ၀
March 31, 2019 admin555 Comments Off on “ရွှေကြာ” (သို့မဟုတ်) တရုတ်ရာဇ၀င်ထဲက ဓလေ့ ထုံးတမ်းရဲ့ သားကောင် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဘ၀
ငွေတစ်ပြားမှ မရှိသည်ဖြစ်စေ. . .ငွေနည်းနည်းပဲရှိသည်ဖြစ်စေ. . ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်လို့ရပါတယ်
March 31, 2019 admin555 Comments Off on ငွေတစ်ပြားမှ မရှိသည်ဖြစ်စေ. . .ငွေနည်းနည်းပဲရှိသည်ဖြစ်စေ. . ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်လို့ရပါတယ်